Maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo laga hadlay – Radio Muqdisho
Maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo laga hadlay
Kulan looga hadlayey sidii maamul loogu sameen lahaa goballada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho kaasi oo ay ka qeyb galeen waxgarad, siyaasiyiin iyo qeybaha kale ee bulshada.
kulanka ayaa intii ka hadashay waxa ay ku dheeraadeen ahmiyadda ay bulshada wada degta goboladaasi u heli lahaayeen maamul ay ku mideysanyihiin oo qeyb ka noqda hirgelinta Nidaamka Federaalka ah ee Soomaaliya oo ay dowladdu qaadatay.
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo ka mid ah Ugaasyada Soomaaliyeed, kana hadlay kulanka ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan hadalkii dhawaan uu sheegay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ee ahaa in maamulada dhiman la dhameystiri doono dhismahooda, isagoo bulshada iyo waxgaradka labada gobol ka codsaday in ay u istaagaan dhismaha maamul goboleed loo dhanyahay.
Pro Cali Maxamed Geeddi Ra’iisul wasaarihii hore ee dowladdii KMG ahayd oo isna kulanka hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in la sameeyo maamul ay ku mideysanyihiin bulshada degta Gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, isagoo xusay in dhankiisa uu gacan ka geysan doono sidii arrimahaasi ay u hirgeli lahaayeen.
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu dilay Muqdisho